Mikatsaka Ny Hamerina Hamaritra ny Atao Hoe Fianakaviana i Romania · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Aogositra 2017 16:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Română , русский, Español, Ελληνικά, 日本語, Català, Italiano, English
Fianakaviana Romaniana manao fitafy nentim-paharazana. Sary avy amin'i Adina Voicu (Sehatra ho an'ny daholobe avi amin'ny Good Free Photos)
Avy amin'i Ana-Maria Dima
Herinandro vitsy lasa izay, niresaka tamin'ny talen'ny sekoly aho momba ny fiaimpiainan'ireo ankizy voasoratra anarana ao amin'ny sekoliny sy any amin'ny faritra hafa, any amin'ny faritra iray mahantra indrindra any atsimon'i Romania. Ny hanangona ny vaovao momba ny fari-piainan'ireo ankizy amin'ny ankapobeny, olana lehibe any amin'ny firenena izay ny 46.8%-n'ny ankizy dia tandindonim-pahantràna sy fanilikilihina ara-tsosialy, no fikasako.
Raha ny marina, dia zavatra voafaritra kokoa no kendreko. Tiako ho fantatra ny fahalalàn'ireo mpanabe an-tsekoly ny zava-manjò ireo ankizy ireo any an-tranony sy ny fiainan'ny fianakavian'ireo ankizy mankany an-tsekoly ireo. Koa satria sekoly ambanivohitra no resahana, dia tsy mahagaga ny fandrenesana ny momba ny tokantrano ianjadian'ny fahantrana, ny fimamoana ary ny herisetra an-tokantrano. Fa ny vaovao fanampin'io lisitra io dia ny famelàna ny ankizy ho tezain'ny olona hafa ao anatin'ny fianakaviana satria miasa any ivelany ny ray aman-dreny — ankizy izay miafara amin'ny fijaliana noho ny tsy fahampiana ara-materialy sy ara-pitiavana satria mianatra mikaràtaka miaraka amin'ny elanelana be, tsy manana ny fitiavana avy amin'ny iray, na avy amin'ny ray aman-dreny , amin'ny tranga sasany.
Nanomboka nitomany ilay talen'ny sekoly tamin'ny fiafaran'ny resakay. Ontsa izy satria mavesatra loatra raha amin'ny taonany ny fihetseham-po zakain'ireo ankizy ao amin'ny sekoliny ireo sy ireo any amin'ny distrika hafa ; sady tsy nohenoina ireo ankizy ireo no tsy nahazo tohana ara-pitiavana sahaza. Tsy mba afaka manome torohevitra tandrify ho an'ny tsirairay ireo psikologin'ny sekoly any Romania. Fanohanana ho anà vondrona no omeny rehefa ilaina, iray ihany ny mpanolotsaina ara-panabeazana ho an'ny mpianatra 1000 ary tsy hijerena fari-pahalalàna. Angamba ny fototra maha-mpanolotsaina azy no manampy betsaka an'ilay tale.
Hatramin'ny 2008, dia nanara-maso ny momba ireo ankizy nilaozan'ny ray aman-dreniny niasa any ivelany ny Manampahefana Nasionaly misahana ny Fiarovana sy Fampiharana ny Zon'ny Ankizy. Araka ny tarehimarika mivoaka isaky ny enimbolana, ankizy manodidina ny100.000 eo ho eo manerana ny firenena no ilaozan'ny ray aman-dreniny miasa any ivelany, na dia heverina ho ambany lavitra aza io isa io. Noheverina fa nampilaza ireo manampahefana ao an-toerana ireo ray aman-dreny talohan'ny nandaozany ny firenena, mba hahafahan'ireo manampahefana ao an-toerana ireo manara-maso izay hahasoa ny zanany amin'ny resaka fikarakarana rehetra, na miaraka amin'ny fianakaviana, na fianakaviana afaka mandray, na fikambanana fitaizàna. Fa tsy mbola voasahan'izany fomba izany ny firenena manontolo, ary sarotra kokoa ny tranga rehefa any amin'ny vondrona toy ny Roms, satria ireo ray aman-dreny izy tenany no tsy manana antontan-taratasy mifanaraka amin'izany, tsy dia mahay taratasy loatra na tsy mahalala na tsy te-hanatanteraka ny adidiny takian'ny lalàna. Misy ihany koa ny tranga izay tsy ilazàn'ny ray aman-dreny ny fialàny amin'ny firenena mba tsy ho very ny fanampiana ara-tsosialy.
Romania no faharoa aorian'i Siria amin'ny resaka fitomboan'ny zanany am-pielezana teo anelanelan'ny 2000 sy ny 2015. Tsy manampaharoa eo amin'ny tantaran'ny firenena ity habetsahan'ny fifindràn'ny mponina ity. Resaka manaitra sy mampitebiteby ny fiarahamonina sy ny fitondrana tao anatin'ny taona vitsivitsy ny fialàn'ny Romaniana amin'ny taniny. Ankoatry ny fandaozan'ny ray aman-dreny ny zanany mba hiasa any ivelany, izay matetika ao anatin'ny fahantrana sy tsy fahampiana ara-materialy izay hitan'ny fanjakana fa sarotra onerana, dia olana iray hafa ny fandosiran'ny mpitsabo mahay. Ao aminà firenena miha-vitsy mponina haingana be dia ilaina ny fanafanàna ara-pihetsehampo, traikefa vaovao izay hahatanterahan'ilay hevitra vaovao momba ny fiainam-pianakaviana iraisam-pirenena rehefa miha-manify sy marefo ny rafitry ny fianakaviana.
Fa araka ny voamarik'i Ulrich Beck tao amin'ilay Fiarahamonina tandindonin-doza : mizotra mankany amin'ny fihavaozana mahazatra, “sehatra fotsiny ny fianakaviana fa tsy fototry ny zava-miseho.” Sarotra ny tontolon'ny fihetsehampo izay iainan'ny fianakaviana Romaniana amin'izao fotoana izao, mba tsy hitenenana betsaka. Azon'ireo ray aman-dreny atao ny mamporisika ireo zanany vao nahazo maripahaizana mba hitady asa tsara karama kokoa sy honina any Eoropa andrefana, no sady malahelo mangina ihany ny amin'ny zava-misy izay manosika azy ireo ho amin'ny fifindràmonina. Misy koa ireo mifindra monina satria tsy manana safidy firy amin'ny fitadiavambola, indrindra rehefa mipetraka any ambanivohitra lavitra. Ireo no toerana misy ireo fianakaviana tena mafy ady indrindra, tsy ny fiatrehana ny olana ara-materialy ihany, fa koa ny fikojakojana ny fifandraisana isankarazany amin'ireo fianakaviana, amin'ny antso amin'ny elanelan-tany lavitra, ny fanoratana amin'ny Facebook, ny hafatra amin'ny WhatsApp ary ny imailaka.
Ekena fa misy ireo finoana ara-kolontsaina latsa-paka momba ny tokony ho fiasan'ny fianakaviana, ary iray amin'izany ny hoe tokony hivondrona ara-batana ny fianakaviana. Angamba sisan'ny andro taloha tamin'ny fotoanan'ny Kaominisma izany, fony noho ny fahatahoran'ny fanjakana ny fifindràmonina faobe dia matetika tsy avela miantso ny fianakaviany ho any aminy ireo romaniana mpifindramonina mpanao tombokandro miasa any ivelany. Fa hafa indray ny fivelaran'ny fiovàna amin'izao. Amin'izao fotoana izao dia misy ireo tanàna tsy ahitàna afa-tsy zokiolona, toy ny hoe tanàna haolo, fiovàna demografika izay tsapa ho loza mananontanona manoloana ny haben'ny fivoarana tsy mbola nisy tahaka azy. Tsy azo ialàna mora foana ny fanontaniana hoe ” Inona no hitranga amintsika?”
Fa misy ireo disadisa mitampify any ambany erana. Na dia mampiseho mari-pivoarana aza ny firenena, amin'ireo famantarana maron'ny fandrosoan'ny toekaren'i Romania tato ho ato, dia misy koa ny fahatsapàna hoe andalam-paharavàna ny rafitry ny sosialy sy ny kolontsain'ny firenena, ary amin'ny fomba tsy azo refesina mora na vinavinaina. Io fiovàna io koa angamba no hery ao ambadik'ilay Fitsapankevibahoaka momba ny Fianakaviana hatao atsy ho atsy. Tsy mbola voafaritra aloha ny daty, fa ny fanambadian'ny lahy sy ny vavy no famaritana kendreny ho fototry ny fianakaviana. Kanefa, satria ny tsindry ara-toekarena no mahatonga ireo romaniana hifindra monina, tokony hitohy mandritra ny fotoana vaofaritra ny ady mba hamerenana indray ny tontolo sarobidin'ny fitiavana – lalaina sy atao filamatra aza indraindray – izay itoeran'ny fahalalàna kely momba ny atao hoe fianakaviana.
Romaniana miasa amin'ny tontolon'ny fampivoarana iraisam-pirenena i Ana Maria Dima. Araho ao amin'ny Twitter @AnaMariaDima izy.
Makedonia 5 andro izay